ကောသလမင်းကြီးအိမ်မက်ဆိုတာ အလကားမဟုတ် Prophecy | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကောသလမင်းကြီးအိမ်မက်ဆိုတာ အလကားမဟုတ် Prophecy
ကောသလမင်းကြီးအိမ်မက်ဆိုတာ အလကားမဟုတ် Prophecy
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Nov 3, 2010 in Community & Society, Cultures, Parenting & Pregnancy, Relationships & Family, World News | 12 comments
စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းခလေး တယောက်ဟာ ခလေးတဦး ဖွားမြင်လိုက်ပါတယ်၊ အာဏာပိုင်များက သူမနဲ့ သူမမိသားစုကို ခလေးအုပ်ထိန်းခွင့် ပေးဖို့သင့်မသင့်ဆိုတာ လေ့လာ သုံးသပ်နေတုန်းပဲလို့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတဦးက အင်္ဂါနေ့မှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ခလေးကို လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က Jerez de la Frontera မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာလို့ Andalusia ဒေသ လူမှုရေးရာ ဝန်ကြီး Micaela Navarro ပြောကြားလိုက်တာပါ။ နာဗာရိုက သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားရာမှာ ခလေးဖခင်ဖြစ်သူဟာလည်း အသက်မပြည့်သေးသူ တဦးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ခလေးမိခင်လုပ်သူရော ခလေးပါ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြပါတယ်။ သူမရဲ့ဌာနက ခလေးရဲ့ လိင်အမျိုးအစားအပါအဝင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ဖို့ ငြင်းဆိုလိုက်ပြီး အာဏာပိုင်များက ဒီကိစ္စကို မုဒိမ်းမှုအဖြစ် သဘောထားမှာ မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ဘယ်လို မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမျိုးကိုမှ လုပ်နေတာ မရှိကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံ တရားဥပဒေအရ အသက်တဆယ့်သုံးနှစ်အောက် အရွယ်တဦးဦးနဲ့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရင်တောင်မှ ခလေးသူငယ် အလွဲသုံးစားမှု မြောက်တယ်လို့ မက်ဒရစ်မြို့ရှိ စပိန် တရားရေးဌာန တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုထူးခြားတဲ့ ကိစ္စမှာ ခလေးအဖေ ကိုယ်တိုင်က အသက်မပြည့်သူတဦးဖြစ်နေလို့ ပိုရှုပ်ထွေးရပြီး သူ့ကိုတရားစွဲလို့ ရနိုင်မရနိုင် ဆိုတာ ရှင်းလင်းမှု မရှိဘူးလို့ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တဦးက ဆိုပါတယ်။ စပိန်သတင်းစာများ အဆိုအရတော့ မိခင် လုပ်သူဟာ ရိုမေးနီးယန်း ဇာတိဖွားတဦး ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ Diario de Jerez က မိန်းခလေးဟာ စပိန်နိုင်ငံကို ရောက်စဉ်ကထဲက ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီးသားလို့ ရေးသားထားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူမ ဘယ်အချိန်ကထဲက ရောက်လာခဲ့လည်း ဆိုတာတော့ ပြောမထားပါဘူး။ ဖခင်လုပ်သူဟာ စပိန်နိုင်ငံမှာပဲလား ဆိုတာလည်း မသဲကွဲသေးပါဘူး။ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဆဲမိုလို့ မိန်းခလေးငယ်များဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ အလွန်ကို အသက်အန္တရာယ် များတယ်လို့ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများက သတိပေးထားပါတယ်။ သုတေသန လေ့လာချက် များအရ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းခလေးများဟာ အချိန်မတိုင်ခင် ခလေးမွေးဖွားဖို့ ပိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ မွေးကင်းစခလေးများမှာ အသက်တနှစ်မတိုင်ခင် သေဆုံးဖို့ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများကြောင်း သိရပါတယ် လို့ ဒီနေ့ကျနော် ဖတ်ရတဲ့ ရာဟူးသတင်းကနေ ဘာသာပြန် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
10-year-old gives birth in southern Spain – Tue Nov 2, 6:04 pm ET
MADRID – A 10-year-old girl has given birth in southern Spain and authorities are evaluating whether to let her and her family retain custody of the baby, an official said Tuesday. The baby was born last week in the city of Jerez de la Frontera, said Micaela Navarro, the Andalusia region’s social affairs minister.
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ ဆုတ်ကပ်ဆိုတာကို လက်တွေ့ပြနေတာပါ .. ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိသူတိုင်း ဝေဖန်အပြစ်တင်မှုတွေမလုပ်ပဲ ဗြဟ္မာစိုရ်တရား လက်ကိုင်ထားနိုင်ကြပါစေ …
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တယ်လဲ မျိုးအောင်ကြတာပဲနော်
ဘယ်လိုခေတ်ကြီးပါလိမ့် ဆယ်နှစ်သမီးကတောင် ဒီလိုဖြစ်နေရင် နောက်ဆို ဘယ်လိုများနေပါ့မလဲ ။ မီဒီယာတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှူတွေပါနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဆယ်နှစ်အရွယ်ဆိုတာကစားပြေးလွှားနေတုန်းအရွယ်လေးတွေပါ လူညွှန့်တုံးသွားသလို ခံစားရပါတယ် ။
အိနိ္ဒယမှာ ရှေးပဝေသဏီကတည်းက မိန်းကလေး၈-၉နှစ်လောက်ဆို ယောက်ျားလေးအိမ်ပို ့လိုက်ပြီ။ ကျွန်မယားအဖြစ်ရောင်းစားလိုက်တာပေါ့..။
တရုတ်ပြည်မှာ တလောက မိန်းခလေးငယ်တွေ ဟိုမုန်းပါတဲ့နို့မှုန့်တွေစားပြီး အပျိုဖြစ်ကုန်လို့ မိဘတွေ နို့မှုန့်ကုမ္ပဏီတရားစွဲမလို့လုပ်နေတာ သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်..။
မိန်းကလေးငယ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်တာက ဟိုမုန်းတွေတခုခုဖေါက်ပြန်သွားလို့ပါ..။
မြန်မာတွေအဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ကောသလမင်းကြီးမလွှဲချပဲ.. ဟိုမုန်းလွန်ကဲစေတဲ့ စားသောက်စရာတွေ ဆေးတွေ၊ သေသေချာချာ စစ်ဆေးစေသင့်တယ်..။
အစိုးရ လုပ်ရမှာပေါ့..။ အခုမဲဆွယ်နေတဲ့အမတ်တွေ ဥပဒေပြုခိုင်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကတိတောင်းကြည့်လေ..။
ဗျို့.. ဆရာကြီး.. ဟိုမုန်း ဟိုမုန်းနဲ့နော်.. ချာပါတီတွေ မထိနဲ့.. ဂျုံကြမ်းနဲ့ သေချာ လုပ်ပြီး မီးဖုတ်ထားတာ.. ကြိုက်ရင် မဲပေးသွား.. ဒါဘဲ..
ငယ်သည့်အတွက် မသိသင့်သေးပါ.. အရွယ်ရောက်မှ သိသင့်သည်။
ဒီနှစ်ခု ကြားမှာ.. လူဆိုတာ သိရင် လက်တည့်စမ်းတက်ကြတာဘဲ..
ငယ်သေးတယ် ဆိုပြီးတော့လဲ ပစ် မထားကြနဲ့ .. သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ဆိုပြီးတော့လဲ လိင်ကွဲတွေ အတူတွဲတာကို ပစ်မထားကြနဲ့ .. ဝမ်းကွဲတွေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .ဆိုပြီးတော့လဲ မျက်နှာလွှဲ ထိန်းမခိုင်းနဲ့ .. ဦးလေးပါ ဆိုပြီးတော့လဲ .. ထိန်းမခိုင်းနဲ့ .. ကိုယ့်သမီးကို ကိုယ်သာထိန်းကြပါ .. သမီးတွေကလဲ မိဘများ ထိန်းတာကို လိုက်နာကြဖို့ .. လက်တည့် မစမ်းကြဖို့ ..
အဲဒါမှ ဘူးသီးနုနု အခူးမခံရမှာ လို့ မှာစမ်းပါရစေ ..
ကောသလမင်းကြီး အိမ်က ဘယ်လိုလဲတော့ မသိဘူး.. ကောသလမင်းက အိပ်မက် ၁၆ခါ မက်နိုင်လောက်အောင် အိပ်ပုတ်ကြီးတယ်.. အစားကြီးလွန်းလို့.. သူဗိုက်မှာ မြစ်သုံးကြောင်း ရှိသတဲ့.. ဝပြီး ဗိုက်ရွဲလွန်းလို့.. ရေသောက်လို့ ပါးစပ်က ရေလျှံကျရင် ဗိုက်ပေါ်ကျတာနဲ့.. ဘေးနှစ်ဘက်နဲ့ အလယ် ဆိုပြီး လမ်းကြောင်း သုံးကြောင်းခွဲပြီး ရေစီးနိုင်တယ်လို့ ကြားဘူးတာဘဲ..
ကောသလမင်းကြီးအိပ်မက်ကို သိချင်ရင် တင်ပေးပါမယ်။
ပန်းချီကျော်ကြီးရဲ့လက်ရာနဲ့ ကျောက်တော်ကြီးဘုရားထဲမှာချိ်တ်ထားတာကိ ုဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါမယ်။
လုံးဝကို မှန်ကန်တဲ့ အိပ်မက်တွေပါ။
လူ့သက်တမ်းက တဖြည်းဖြည်းတိုလာတော့လည်း လိင်ဆက်ဆံတဲ့အရွယ်က အချိုးချပြီး ကျသွားတယ်ထင်တာပဲ…
နာမည်တော့ သေချာ မှန်အောင် မပြောတတ်ဘူး.. ဟိုမင်းသားကြီးလား.. ဆံပင် ဘေးခွဲနဲ့ ကတယ်လေ.. အဲဖရက် ပလစ်စလီ အဲဒီ မင်းသားကြီးများလား.. ထင်တာ ရမ်းတုတ်တာနော်.. နာမည်လည်း အသံထွက် မှန်ချင်မှ မှန်မယ် ဘိုလို စာလုံးပေါင်း ပိုပြီး မသိဘူး..